မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင် စုစည်းမှု (3) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:31 PM | No မှတ်ချက် | ချမ်းငြိမ်း - မှော်ဝန်း
နောက်များလည်း ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဇာတ်ကားများကို အခုလို စုစည်းပေးသွားပါဦးမယ်...။
( 121 ) Switch (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Crime | Romance အမျိုးအစား ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ..
သေသေသပ်သပ် နဲ့ အလွန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ တရုပ်ကားလေးပါ.
( 122 ) Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sherlock Holmes ဆိုရင် ကျနော်ကတော့ စုံထောက်ကြီးဦးစံရှား ကို တန်းမြင်တော့တာပါပဲ..
ဒီဇာတ်ကားကတော့ စုံထောက်ကြီး Sherlock Holmes ရဲ့..
A Game of Shadows ကို ဘယ်လိုဖေါ်ထုတ်မလဲ တွေ့ရမှာပါ..
( 123 ) Shrek the Musical (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ပျင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ဟာသလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Comedy | Fantasy | Musical အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
IMDb မှာ rating: 7.2 အထိရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ..
ဒီဇာတ်ကားမျိုးကို ကြည့်ရင် ဗမာပြည်မှာတုန်းက ဘုရားပွဲတွေမှာ ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့
ဇာတ်ပွဲတွေ ပြဇာတ်တွေကို အလွမ်းပိုမိပြန်ပါတယ်..
( 124 ) Snow White And The Huntsman(2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ 2012 တုန်းက Top 10 ၀င်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
( 125 ) TITANIC (1997) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒါရိုက်တာ James Cameron ရဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
( 126 ) The Last Stand (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Arnold Schwarzenegger ( မင်းသားကြီး အာနိုး ) ရဲ့ ဇာတ်ကားပါ..
( 127 ) The Great Gatsby (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Drama | Romance အမျိုးအစား Leonardo DiCaprio ရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားပါ..
( 128 ) The Frozen Ground (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်းသားကြီး Nicolas Cage ရဲ့ဇာတ်လမ်းပါ
Biography | Crime | History အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်
အထူးတလည်ပြောပြနေစရာ မလိုအောင်ကို ကောင်းလွန်းလှပါတယ်
( 129 ) The Monkey King2014 ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
( 130 ) The Expendables3(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 131 ) The Expendables2(2012) ကို မြန်မာစာတန်းထိုး
( 132 ) The Expendables (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဟောလိဝုဒ် သီဟတင်စိုး နေထက်လင်း အောင်ခိုင် ဂျွန်ဂို ရဲမင်းပိုင်တို့
( 133 ) Thor: 2- The Dark World (2013) ( မြန်မာစာတန်းထိုး )
( 134 ) Thor (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Adventure | Fantasy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
Thor ကတော့ ကျနော်အကြိုက်ဆုံး superhero ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
( 135 ) The Legend of Hercules (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်တဲ့ Hercules
( 136 ) The Secret World of Arrietty (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Animation | Adventure | Family
အမျိုးအစား ဇာတ်ကားလေးပါ.... ဒီလောကမှာ
လူသေးသေး လေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့.. ဂျပန်ရိုးရာ ပုံပြင်တွေကို
Animation တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတကားဖန်တီးထားတာပါ..
( 137 ) The Cabin in the Woods (2012) မြန်မာစာတန်း
Horror | Mystery | Thriller အမျိုးအစား သရဲကားပါ..
( 138 ) The Flowers of War (မြန်မာစာတန်းထိုး)
1937 ခုနှစ်မှာ တရုပ်နိုင်ငံ Nanking မြို့ကို
( 139 ) Transformers Age of Extinction (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
( 140 ) Transformers (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 141 ) The Lady (မြန်မာစာတန်းထိုး)
( 142 ) Takedown (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး
Crime | Drama | Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်
မင်းသား Skeet Ulrich နဲ့ Russell Wong,
မင်းသမီး Angela Featherstone တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်..။
( 143 ) Talaash (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dhoom ,3Idiots စတဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့
Aamir Khan ရဲ့ ဇာတ်ကားဟောင်းလေးပါ.
( 144 ) Taken (I) (2008) မြန်မာစာတန်းထိုးမင်းသားကြီး
Liam Neeson ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဇာတ်ကားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
( 145 ) Taken2(2012) မြန်မာစာတန်းထိုးမင်းသားကြီး
Liam Neeson ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Taken ရဲ့
နောက်ဆက်တွဲ Taken2(2012) ပါ...
( 146 ) Unknown (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်းသားကြီး Liam Neeson ရဲ့
Action | Mystery | Thriller အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဟောင်းလေးပါ..
တောင်းဆိုထားတဲ့ Liam Neeson ပရိတ်သတ်တွေ
( 147 ) Tarzan (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Animation | Action | Adventure သုံးမျိူးလုံးကို
တပြိုင်နက်ထဲ ခံစားရမယ့် ဇာတ်ကားအမျိူးအစားပါ..။
၂၀၁၄ မှာ ထွက်တဲ့ Animation movies တွေထဲမှာ
( 148 ) The Four2(မြန်မာစာတန်းထိုး)
Liu Yifei ( ဂူးဂူး ) ရဲ့ ပြီးခဲ့နှစ်က နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားလေးပါ..
( 149 ) The Four ( 2012 ) မြန်မာစာတန်းထိုး အဟောင်းဖြစ်နေလို့ မတင်တော့ဘူး လို့ နေတာ
Youtube ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
( 150 ) The Pirate Fairy (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Animation | Adventure | Fantasy အမျိုးအစားပါ..
Animation ချစ်သူတွေ နှစ်သက်ကြမယ့် ဇာတ်ကားလေးပါ
( 151 ) The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part2(2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 152 ) The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 153 ) Underworld: Awakening (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 154 ) Underworld: Rise of the Lycans (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 155 ) Underworld: Evolution (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 156 ) Underworld (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
( 157 ) The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
( 158 ) World War Z (2013) (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Brad Pitt ရဲ့ ကားတွေ ထဲမှာတော့ ဒီကားကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သလို
Zombie ကားတွေထဲမှာလည်း အနုပညာအမြှောက်ဆုံး ဇာတ်ကားလို့ဆိုရပါမယ်..
( 159 ) Wolves (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Horror အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးပါ..
( 160 ) Warrior King2(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ထိုင်းမင်းသား Tony Jaa နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ.
( 161 ) The Warrior's Way (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action | Fantasy | Western အမျိုးအစား အဟောင်းတွေ ထဲက ဇာတ်ကား အကောင်းလေးပါ.. Warrior (စစ်သည်တော်) အဖြစ်အစွမ်းကုန်လေ့ကျင့်ပေးခံထားရတဲ့
Jang Dong-gun (့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒါရိုက်တာရင် လို့ လူသိများတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသား Jang Dong-gun) ဟာအလွမ်းပုလွေဆရာများအဖွဲ့ ရဲ့
သူ့ ဘ၀မှာအပြီးမြောက်ချင်ဆုံး ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်တဲ့
( 162 ) White House Down (2013) မြန်မာ စာတန်းထိုး
တချိန်က အလွန်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Air Force One ထက်
ဒီ White House Down ဇာတ်ကားကို ပိုကြိုက်ပါတယ်.
( 163 ) Xmen days of future past ( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ တော်တော်များများ
စောင့်မျှော်နေတဲ့ကားဖြစ်ပြီး၊ စောင့်ရကြိုးနပ်တယ်လို့ ပဲပြောပါရစေ။
အကောင်းဆုံး Superhero ကားမဟုတ်ရင်တောင်မှ
အကောင်း ဆုံး X-Men ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်သလို၊
လက်ရှိ နွေရာသီရဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်
(၁၆၄) The Dead Lands (2014) (မြန်မာစာတန်းထိုး)
The Dead Lands (2014) ကို (မြန်မာစာတန်းထိုး)နဲ့ တင်ပေးလိုက်တယ် http://movie.channyein.org/2015/05/the-dead-lands-2014.html
(၁၆၅) Fast And Furious7(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ မိတ်ဆက်စရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်..Vin Diesel ၊ Paul Walker ၊ အပြင် Jason Statham ပါ ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်ပါတယ်..
(၁၆၇) Hansel & Gretel Witch Hunters (2013)မြန်မာစာတန်းထိုး
Action, Fantasy, Horror အမျိုးစားဇာတ်ကားလေးပါ တစ္ဆေ မုဆိုးတွေဖြစ်တဲ့ Hansel နဲ့ Gretel တို့ရဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို လိုက်လံနှိမ်နင်းတဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို သဲထိုက်ရင်လှိုပ်ခံစားရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ..
(၁၆၈) Apocalypse Pompeii (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Action | Adventure အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အစ အဆုံး ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာရသတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းလှတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ..
မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြည့်ဖြစ်အောင်သာ ကြည့်ဗျို့..
(၁၆၉) City of Ember (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဗိသုကာ သိပ္ပံပညာရှင် အင်ဂျင်နီယာတွေဟာအနာဂတ်အတွက်
(၁၇၀) Pompeii (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Action, Adventure, Drama အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Pompeii.2014 ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် http://movie.channyein.org/2015/06/pompeii2014.html
(၁၇၁) How to Train Your Dragon 1 (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
(၁၇၂) How to Train Your Dragon2(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
(၁၇၃) The Host (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဇာတ်လမ်းကတော့ ... ဂြိုလ်သားတွေ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာကိုထိန်းချုပ်ပြီးလူသားတွေ
ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က လူသားတွေရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေကို ဖျက်ဆီးပြီး သူတို့ ၀ိဥာဉ်နဲ့ အစားထိုးလို့ ကမ္ဘာမြေကို အုပ်စိုးထားပါတယ်..။အဲလိုအချိန်မှာ...
(၁၇၄) The Devil Inside (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
သရဲကားတောင်းဆိုထားသူများအတွက်..Horror ဇာတ်ကား ကြမ်းကြမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကတော့ မကောင်းဆိုးရွား ပူးကပ်ခံထားရလို့စိတ်ရောဂါဆေးရုံရောက်နေတဲ့ အမေကိုကယ်တင်ချင်တဲ့ အစ်ဇဘဲလား ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရယ်..မကောင်းဆိုးရွားပူးကပ်တဲ့သူတွေကိုတရားမ၀င် လိုက်လံကယ်တင်နေတဲ့ ပရောဂ ဆရာတွေဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး၂ ပါးရယ်..သူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ မကောင်းဆိုးရွားတွေနှင့်...
(၁၇၅) Dragon Blade (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
05 March 2015 ရက်နေကတည်းက မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်... အဲဒီတုန်းက တရုတ်စာတန်း ရော အင်္ဂလိပ်စာတန်းပါ ပါနေလို့စာတန်းတွဲရတာ စိတ်တိုင်းမကျလို့ အတော်လေးအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်.. အခုတော့ BluRay ထွက်လာပြီမို့ မြန်မာစာတန်းနဲ့ ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. http://movie.channyein.org/2015/02/dragon-blade-2015.html
(၁၇၆) Conan the Barbarian (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Action, Adventure, Fantasyအမျိုးအစား Conan.The.Barbarian.2011 ကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
(၁၇၇) The Hunger Games (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Jennifer Lawrence ရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားလေးပါ..အခုဆိုရင် The Hunger Games: Catching Fire (2013) ရယ် The Hunger Games: Mockingjay
- Part 1 (2014) ရယ်ဆိုပြီး ၃ ကားထွက်ပြီးခဲ့ပါပြီ..။
(၁၇၈) The Hunger Games: Catching Fire (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဇာတ်လမ်းကို မိတ်ဆက်ရရင်တော့.. The Hunger Games: Catching Fire က ပထမကား The Hunger Games ထက် အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့...
(၁၇၉) The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး ဇာတ်လမ်းကတော့ အရင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့မတူတော့ပါဘူး။ Hunger Game တွေမလာတော့ပဲနဲ့ ဒီကားက နိုင်ငံရေးတွေပါလာပြီး၊ လူတွေ ထကြွပုံကန်ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ
(၁၈၀) Drive Angry (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်းသားကြီး Nicolas Cage နဲ့ မင်းသမီးချောAmber Heard ရယ် ထောင်ဖောက်ကားထဲမှာကျနော်အလွန်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ အဲလက်စ် အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ William Fichtner တို့ရဲ့Action, Comedy, Fantasy အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါဇာတ်လမ်းကတော့ ငရဲပြည်ကနေ သမီးကိုလိုက်ကယ်တဲ့ Milton အဖြစ် မင်းသားကြီးNicolas Cage ကသရုပ်ဆောင်ထားပြီးငရဲပြည်ကနေ Nicolas Cage
နောက်ကိုလိုက်ပြီးFBI အဖြစ်အသွင်ဆောင်ထားတဲ့ The Accountantအဖြစ်...